Wariyeyaashii Swedish-ka oo Cafis Waydiisanaya Xeer Dhaqameedka Ethiopia – Rasaasa News
Jan 10, 2012 Martin Schibbye and Johan Persson
Stockholm, January 10, 2012 [ras] – Labada wariye ee reer Sweden Martin Schibbye iyo Johan Persson, oo lagu helay iyaga oo ku jira arimo argaggixisanimo, ka dibna lagu xukumay 11 sano oo xadhig ah, ayaa codsanaya in la cafiyo iyaga oo maraya xeer dhaqameedka dalka ethiopia.
Labadan wariye ayaa lagu qabtay gudaha gabalka Ogaden iyaga oo la socda koox arggagixiso ah, mar ay dagaal fooda is dareen ciidanka Ethiopia iyo kooxda ay la socdeen bishii July 2011.
Wariyeyaasha ayaa lagu qaaday sharciga arggagixisada, ka dib kolkii lagu helay in ay taageerayeen kooxda, watana hub iyo iyaga oo si sharci daro ah ku soo galay dalka Ethiopia.
Wariyeyaasha ayaa hada waxay doonayaan in xeer dhaqameedka Ethiopia ay waydiistaan cafis,intii ay qaadan lahaayeen abiil ciqaabta 11 sano ah.
War gaaban oo E-mail maanta ay ugu dirtay Afhayeenka labada wiil Anna Roxvall wakaalada Associated Press ayey ku sheegtay Martin Schibbye and Johan Persson ay yidhaahdeen “waxaa jira xeer dhaqameed wax cafiya oo Ethiopia ay wax ku cafido, waxaanan dooranay aaminsanahayna xeerkaas dhaqanka.”
Wariyeyaashu waxay aqoonsadeen in ay sharci daro ku galeen dalka, laakiin waxay inkireen dacwada arggagixisada, waxayna dheheen warar ayaan uruurinaynay ku saabsan shirkada saliida qoda ee Swedishka ah.
Maxkamadu ugama jimcin, markay aragtay cida ay la socdeen iyo hanaanka ay dalka ku soo galeen iyo iyaga oo hub ku tababaranaya, ayey liqsiisay 11 sano oo xadhig ah.
Waxaana isku dayey in ay ka faramaroojisaan maxkamada dalalka reer Yurub,oo aan hore u qabin in sharciga Afrika shaqeeyo.